Hindiya Visa Ganacsiga Hindiya, Hindi - Hindiya Visa Online
Fiisaha Ganacsiga Hindiya (eVisa India ee Ganacsiga)
Dhammaan faahfaahinta, shuruudaha, xaaladaha, muddada iyo shuruudaha u-qalmitaanka ee booqde kasta oo u baahan Hindiya lagu xuso halkan.
Iyadoo ay soo ifbaxday caalamiyeynta, xoojinta suuqa xorta ah, iyo u xoreynta dhaqaalaheeda, Hindiya waxay noqotay meel heysata muhiimad aad u badan oo ku saabsan adduunka caalamiga ah ee ganacsiga iyo ganacsiga. Waxay dadka adduunka oo dhan ka siisaa fursado ganacsi iyo ganacsi oo gaar ah iyo sidoo kale kheyraad dabiici ah oo laga masaxo iyo shaqaale xirfad leh. Waxaas oo dhami waxay Hindiya ka dhigayaan wax soo jiidasho leh oo soo jiidasho leh indhaha dadka ku hawlan ganacsiga iyo ganacsiga adduunka oo dhan. Dadka adduunka oo idil ee daneynaya inay ganacsi ka sameystaan ​​Hindiya hadda si fudud ayey u sameyn karaan si fudud maxaa yeelay Dowladda Hindiya waxay siisaa elektiroonig ama fiiso elektaroonig ah oo si gaar ah loogu talagalay ujeeddooyin ganacsi. Waad awoodaa dalbo fiisaha Ganacsiga ee Hindiya khadka tooska ah halkii ay ahayd inaad tagto safaaradda maxalliga ah ee Hindiya ee waddankaaga isla sidaas.
Shuruudaha U-qalmitaanka ee Fiisaha Ganacsiga ee Hindiya:
Fiisaha Ganacsiga Hindiya wuxuu ka dhigayaa ku shaqeynta Hindiya shaqo aad u fudud booqdayaasha caalamiga ah ee waddanka jooga ee halkan ganacsiga u jooga laakiin waxay u baahan yihiin inay buuxiyaan shuruudaha u-qalmitaanka qaarkood si ay ugu qalmaan ganacsiga e-Visa. Waxaad joogi kartaa oo keliya 180 maalmood oo isdaba joog ah wadanka gudihiisa Fiisaha Ganacsiga Hindiya. Si kastaba ha noqotee, waxay shaqeyneysaa hal sano ama 365 maalmood waana a Visa Galitaan Badan, taas oo macnaheedu yahay inkasta oo aad joogi karto oo keliya 180 maalmood hal mar oo dalka ah haddana waad soo geli kartaa waddanka dhowr jeer illaa iyo inta ay E-Visa-ku ansax tahay. Sida magaceedaba ka muuqata, waxaad u-qalmi doontaa oo keliya haddii nooca iyo ujeeddada booqashadaada waddanka ay tahay mid ganacsi ama la xiriirto arrimo ganacsi. Iyo fiiso kasta oo kale sida Dalxiiska Dalxiiska sidoo kale laguma dabaqi karo haddii aad u booqanayso ujeedooyin ganacsi. Marka laga reebo shuruudahaan u-qalmitaanka ee Visa Business ee Hindiya, waxaad sidoo kale u baahan tahay inaad buuxiso shuruudaha u-qalmitaanka ee e-Visa guud ahaan, haddii aad sidaas sameysana waxaad xaq u yeelan doontaa inaad dalbato.
Meelaha aad ka codsan karto Visa Business Visa:
Fiisaha Ganacsiga Hindiya waxaa heli kara dhammaan booqdayaasha caalamiga ah ee booqanaya India ujeeddooyin ganacsi ahaan dabiiciyan ah ama xiriir la leh nooc kasta oo ganacsi ah oo ujeedkiisu yahay inuu faa'iido helo. Ujeeddooyinkaan waxaa ka mid noqon kara iibinta ama iibsashada alaabada iyo adeegyada gudaha Hindiya, ka-qeybgalka shirarka ganacsiga sida shirarka farsamada ama shirarka iibka, sameynta ganacsiyo ganacsi ama ganacsi, sameynta safarro, gudbinta muxaadarooyin, qorista shaqaalaha, ka-qeybgalka ganacsiga iyo carwooyinka ganacsiga iyo bandhigyo. , oo u imid dalka khabiir ama khabiir xagga mashruuc ganacsi. Marka, waxaa jira sababo badan oo aad ku raadin karto Visa-ka Ganacsiga ee Hindiya illaa inta ay dhammaantood la xiriiraan mashaariic ganacsi ama ganacsi.
Shuruudaha loogu talagalay Visa Business Visa:
Qaar badan oo ka mid ah shuruudaha loogu talagalay Visa-ka Ganacsiga ee Hindida waxay la mid yihiin kuwa kale e-fiisooyinka. Kuwaas waxaa ka mid ah nuqul elektiroonig ah ama la marsiiyey oo ah bogga koowaad (taariikh nololeed) ee baasaboorka booqdaha, oo ay tahay inuu noqdo Baasaboor caadi ah, maahan mid Dibloomaasiyadeed ama nooc kale oo Baasaboor ah, oo waa inuu ahaadaa mid shaqeynaya ugu yaraan 6 bilood laga bilaabo taariikhda soo gelitaanka Hindiya, haddii kale waxaad u baahan doontaa inaad cusbooneysiiso baasaboorkaaga Shuruudaha kale waa nuqul ka mid ah booqdaha sawirka midabka baasaboorka ee dhawaanta, cinwaanka emaylka shaqada, iyo kaarka deynta ama kaarka deynta ee bixinta khidmadaha dalabka. Shuruudaha kale ee gaarka u ah Fiisaha Ganacsiga Hindida waa faahfaahinta ururka Hindida ama carwada ganacsiga ama bandhigga uu socotada booqan doono, oo ay ku jiraan magaca iyo cinwaanka tixraaca Hindida, bogga shirkadda Hindida ah ee socdaalka booqan doono, warqad casuumaad ah oo ka socota shirkadda Hindida, iyo kaarka ganacsiga ama saxiixa iimaylka iyo sidoo kale cinwaanka websaydhka booqdaha. Sidoo kale waxaa lagaa doonayaa inaad lahaato a soo noqosho ama tigidh sii socda dalka ka baxsan.
Waa inaad dalbataa Fiisaha Ganacsiga ee Hindiya ugu yaraan 4-7 maalmood kahor duulimaadkaaga ama taariikhda aad dalka soo gashay. In kasta oo fiisada elektaroonigga ahi aysan kaaga baahnayn inaad booqato Safaaradda Hindiya, waa inaad hubisaa in baasaboorkaagu leeyahay laba bog oo maran oo Sarkaalka Socdaalka uu ku tuman karo garoonka diyaaradaha. Sida fiisooyinka elektaroonigga ah ee kale, qofka haysta Fiisaha Ganacsiga ee Hindida ah waa inuu ka soo gala waddanka la ansixiyay Boostada Hubinta Socdaalka kuwaas oo isugu jira 28 garoon diyaaradeed iyo 5 dekedood oo qofka haysta waa inuu sidoo kale ka baxo Boostada Hubinta Socdaalka ee la ansixiyay.
Taasi waa waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad ogaato si loo hubiyo inaad u-qalanto Fiisaha Ganacsiga Hindiya iyo waxa lagaaga baahan doono oo dhan markaad dalbato isla. Markaad waxaas oo dhan ogtahay, waxaad si fudud u codsan kartaa Fiisaha Ganacsiga ee Hindiya foomka codsiga waa wax fudud oo toos ah oo haddii aad buuxiso dhammaan shuruudaha u-qalmitaanka oo aad haysato wax kasta oo looga baahan yahay inaad ku dalbato markaa wax dhib ah kama heli doontid dalbashada. Haddii, si kastaba ha noqotee, aad u baahan tahay wax caddeyn ah oo aad u baahan tahay la xiriir caawimaadkeena caawimaad iyo hagis.
Haddii aad u imaaneyso Visa Dalxiis ka dibna hubi shuruudaha loogu talagalay Dalxiis Dalxiis Hindiya Visa.